Nin ka soo jeeda dalalka Aasiya oo isku dilay gudaha Xaramka Shariifka ee Makkah… – Hagaag.com
Nin ka soo jeeda dalalka Aasiya oo isku dilay gudaha Xaramka Shariifka ee Makkah…
Posted on 9 Juunyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Mas’uul ka tirsan wasaarada arrimaha dibada ee Faransiiska ayaa iclaamiyey qofkii isku dilay Xaramka Makkah uu watay jinsiyada Faransiiska, iyaga oo aan ku darin wax war oo dheeraad ah, sida ay ku soo warantay wakaalada wararka ee Faransiiska.
Mas’uuliyiinta Sucuudiga ayaa ku dhawaaqay in fiidnimadii Jimcaha nin dalalka Aasiya ka soo jeeda isku dilay Xaramka Makkah, Imaarada Makkah al-Mukarama ayaa ku sheegtay barteeda Twitter-ka in hay’adaha ammaanku kiiska qofka is dilay gacanta ku hayaan asaga oo ka soo jeeda dalalka Aasiya, wuxuu iska soo tuuray dabaqa sare salaada cishaha kadib.
Xaqiiqdii lama garan karo sababta ku qaaday inuu isdilo, laakin tiro badan oo ka mid ah Muslimiinta bariga Aasiya waxay aaminsan yihiin in ku dhimashada Xaramka Makkah qofku ugu dhowaanayo Allah.
Sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa jiray dhacdooyin isku mid ah oo dad isku dilay gudaha Xaramka iyo kuwo isku dayey laakin laga hor tagay inta aynan isdilin. Waxaa jira sababo badan sida xanuunka maskaxda iyo dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha ama qoyska.
Inta badan dhacdooyinka ismiidaaminta ayaa u dhaca iyadoo qofka iska soo tuuro dabaqa sare si uu ugu soo dhaco gudaha Xaramka Shariifka.